ဓိပ်ပာယျနှငျ့တက်တူး - တက်တူးအနုပညာအကြံပြုချက်များ
sonitattoo ဇန်နဝါရီလ 1, 2017
Birds ဂိမ်းကလူအများကြီးက inking နေကြသည်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်သောအခမဲ့သတ္တဝါများအဖြစ်လူသိများကြသည်။ ဒါဟာအသက်တာ၌အမှုအရာတွေအများကြီးနဲ့ဆက်စပ်နိုင်ပြီးသင်က၏အသုံးချနေယောက်ျားမိန်းမတို့ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ်။ ကလူအချို့သည် nobility, လွတ်လပ်မှု, ငြိမ်းချမ်းရေး, ချစ်ခြင်း, အသိပညာ, စိတ်အားထက်သန်ဉာဏ်, ကြော့ရှင်း, အလှအပ, မိသားစုမိခင်, ဝိညာဉ်ရေးရာလမ်းညွှန်မှုနှင့်စာရေးတံကျပိုအတူငှက်တက်တူးထိုးပေါင်းသင်း။
ငှက်တက်တူးဒီဇိုင်းနှင့်ပုံသဏ္ဍာန်အတွက်အေးမြခြင်းနှင့်ထူးခြားသောကြည့်ဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။ ဤလူမျိုးကိုတခြားတက်တူးထိုးဒီဇိုင်းများကိုကျော်ပါကရှေးခယျြရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအဓိပ္ပါယ်များရှိသည်ကိုငှက်တက်တူးအမျိုးမျိုးဒီဇိုင်းများရှိပါတယ်။ သင်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်လက်မှတ်ရေးထိုးကြရန်လိုအပ်ကြောင်းငှက်အမျိုးအစားကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်တဝတည်းဖြစ်ကြ၏။ Birds ဂိမ်းအရွယ်အစားနှင့်ပုံစံမျိုးစုံအတွက် လာ. ထိုသူတို့အားအသီးအသီးကသူတို့ကိုအကြောင်းကိုအထူးတစ်ခုခုရှိသည်။ အသက်တာ၌ပိုင်ဆိုင်လွတ်လပ်ခွင့်သို့မဟုတ်အသိအဘို့အသွားစိတ်ဝင်စားနေသောပြည်သူ့ဒီအထူးတက်တူးဒီဇိုင်းအဘို့အသွားနိုင်ပါတယ်။ ငှက်တက်တူးထိုးအဲဒါကိုပျောက်အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့နှင့်လည်းပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအကြောင်းကိုအမှုအရာတွေအများကြီးပြောပြနိုင်ခြင်းမရှိဘဲခန္ဓာကိုယ်မဆိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအပေါ်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ပါသည်။
Mandala တက်တူးထိုးအဓိပ္ပါယ်များအများကြီးရှိပြီးတပြင်လုံးကိုဆိုလိုနိုင်ပါ။ စုံလင်ခြင်းနှင့်မှန်သောချိန်ခွင်နှင့်လည်းထာ ပတ်သက်. တက်တူးထိုးဆွေးနွေးပွဲအပေါ်စက်ဝိုင်း, သင်အပေါငျးတို့သအချက်များဆင်းဗဟိုကနေအကွာအဝေးမှာအားလုံးလမ်းကိုကြည့်ရှုသောအခါ။ ဘာသာတရား၏အဖြေတွေအများကြီးသူတို့ရဲ့သစ္စာစောင့်သောအရာတွေအများကြီးပြောထိုသို့အသုံးပြုခြင်းကိုလုပ်နေပါတယ်။
ဟိန္ဒူဘာသာ - ဟိန္ဒူဘာသာအတိုငျး, mandala ဘာဝနာဆိုလိုနိုင်ပါ။ ဤသည်ကအာရုံအဖြစ်အသုံးပြုသည်ကို ထောက်. သည်နှင့်ဝိညာဉ်ရေးရာအကြောင်း tool ကိုဖြစ်လာသည်။
ခရစ်ယန်ဘာသာ - ကအရေးကြီးသောလုပ်ငန်းဆောင်တာနေတဲ့အကြောင်းအချက်ပြလည်းအနုပညာပုံစံအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည့်ပြတင်းပေါက်များကဲ့သို့အသင်းတော်၏အမျိုးမျိုးသောအစိတ်အပိုင်းများအပေါ်ပုံဖော်နိုင်သောကြောင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာအခြားအဆင့်အထိ mandala ယူပါ။
ဗုဒ္ဓဘာသာ - Mandala လည်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနှင့်အတူလုပ်ဖို့တစ်ခုခုရှိသည်, သူတို့ဘာသာရေးနှင့်တရားအားထုတ်ထုံးတမ်း၌အသုံးပြုပါ။ ဒါဟာအသက်တာ၌ဟန်ချက်၏နိမိတ်လက္ခဏာကိုအဖြစ်အသုံးပြုပါသည်။
Mandala တက်တူးကလူအများကြီးဟာကောငျးကငျအလောင်းတွေကဲ့သို့အသက်တာ၌အမှုအရာတွေအများကြီးကိုယ်စားပြု၏အသုံးပြုမှုကိုအောင်သောအရာကိုဖြစ်လာသည်။ အဆိုပါတက်တူးထိုးသငျသညျကောငျးမှတက်တူးထိုး inking တစ်ဦးကိုနှစ်သက်ဖြစ်ကြပြီးစိတ်ကူးတစ်ခုလိုလားလျှင်သင်အမှန်တကယ်နဲ့အတူခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သောထုတ်ပြန်ချက်များတွေအများကြီးအောင်အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ယောက်ျားနှင့်မိန်းမအဘို့အစစ်ဆေးမှုများနောက်ဆုံးပေါ် mandala တက်တူးဒီဇိုင်းအယူအဆအတွက်ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ။
ချိုးတက်တူးမေတ္တာ, ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းတဲ့သင်္ကေတဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါဟာခရစ်ယာန်များအတွက်သန့်ရှင်းသောသတ္တဝါအပေါင်းတို့သည်နှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာကျော်ကြားဖြစ်လာသည်။ ချိုးတက်တူးထိုးဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့တပါးအမျိုးသားတို့၏အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူနေဖို့ရောက်လေပြီ။ လူတွေအများအပြားကဒီတက်တူးထိုးနှင့်တကွကြွလာသောအလှတရားလက်ခံနေကြတယ်။ ချိုးနဲ့ဆက်စပ်လျက်ရှိသောအဓိပ္ပါယ်များအများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါဟာကလေးမွေးဖွား, ဣတ္နှင့်လည်းအလှတရားကိုကိုယ်စားပြုတယ်။
ချိုးတက်တူးထိုးအဓိပ္ပာယ်ကိုကမ္ဘာကိုအရေးပါမှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါဟာသည်းခံစိတ်များအတွက်တက်တူးအဖြစ်အသုံးပြုပါသည်။ ဒါဟာတည်ငြိမ်မှုနှင့်ဆက်လက်ဆိုလိုတာပါ။ ချိုးငှက်၏တက်တူးထိုးချစ်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အဖြူရောင်ချိုးငှက်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းနှင့်အပြစ်ကင်းစင်ကိုယ်စားပြုတယ်။ Little ကအံ့သြစရာတချို့ငယ်ရွယ်မိန်းကလေးငယ်များသန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းနှင့်စောင့်ရှောက်မှု၏လက္ခဏာသက်သေအဖြစ်သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံး inking အတွက်ကြောင့်သွားပါ။ ပြည်သူ့ချိုးငှက် inking စိတ်ကူးတစ်ဦးတက်တူးထိုးတဲ့နေရာမှာမတူညီတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောပြရန်မက်ဆေ့ခ်ျ၏အသုံးချနေအပါအဝင်ချိုးနဲ့တွဲပြီးအခြားအရုပ်ပုံများကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။
မွန်းတက်တူးထိုးကြောင့်ထိုသို့ပြုကိုယ်စားပြုအရာကို inking တွေထဲကလူကြိုက်များအမျိုးအစားဖြစ်လာသည်။ အဲဒါကိုကောငျးကငျအင်အားကြီးကျော်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိပြီးလည်းနက္ခတ္တဗေဒ, ကသမိုင်းနှင့်သိပ္ပံနေတဲ့အကြောင်းအချက်ပြကြောင်းယုံကြည်သူမှင်လူတွေအများအပြား။ လတက်တူးထိုးအဓိပ္ပါယ်များအများကြီးရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတက်တူးထိုး၏အသုံးပြုမှုကိုလုပ်သူတွေကိုအထက်ပါအဓိပ္ပါယ်များစိတ်ဝင်စားမည်မဟုတ်ပါ။ လရှိကြောင်းအဓိပ္ပါယ်များအရေအတွက်ကထူးခြားသောစေသည်အရာဖြစ်တယ်။ ဒါဟာသင်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အဓိပ္ပါယ်များပေးရသည်အခြားပုံရိပ်တွေနဲ့ပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်။ လ၏အဓိပ္ပါယ်များအချို့သည်မှော်ရှိနိုင်ပါသည်။ မှော်လုပ်နိုင်တဲ့မှင်၎င်းတို့၏အလောင်းများကိုမဆိုစိတျအပိုငျးအပျေါတက်တူးထိုးယုံကြည်သူများသည်။ လ၏သိသိသဘောသဘာဝသူတို့က lunacy နှင့်စိတ္တဇကိုကိုယ်စားပြုသူကပြောပါတယ်သောသူဖြစ်ကြ၏နေချိန်မှာသူတို့ရဲ့အလောင်းတွေပေါ်မှာလူတွေမှင်ကြောင့်စေသည်တစ်ခုခုပါပဲ။
လကိုလည်းဣတ္ mystique ဆီသို့ဦးတည်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်ဟုနိုင်ပါတယ်။ လဖန်တီးမှုဆိုလိုနိုင်ပြီးမွေးဖွားရှာနေကြသည်သောသူတို့အဘို့, တကပြီးပြည့်စုံသောကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ လလည်းကြီးထွားမှု, မကောင်းသောအကြံကို, သင်ပေါ်၌ရှိသောအမြှေးသောသူတို့၏အမှတ်ဉာဏ်, ရှားပါး, Wiccan ယုံကြည်ချက်, အနုတ်လက္ခဏာစွမ်းအင်ဖြန့်ချိခြင်းနှင့်မှောင်မိုက်နှစ်ဖက်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ မွန်းတက်တူးကြောင့်အထူးအဓိပ်ပာယျပေးရသည်အခြားပစ္စည်းများနှင့်အတူကိုယ်စားပြုနိုင်ပါတယ်။
ရေဘဝဲတက်တူးထိုးခြင်း၏ဒီဇိုင်းကိုလူတွေကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာ၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများအပေါ်ရှိသည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သောအံ့ဘွယ်သောသူ့ဟာသူဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါတက်တူးထိုးရှုပ်ထွေးဖြစ်ပါတယ်နှင့်ဤကကွဲပြားခြားနားသောအရာတို့ကိုကိုယ်စားပြုသည်ကိုမည်သို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်ရေးသို့မဟုတ်ရေဘဝဲ၏ဆန်းကြယ်မှုများထင်ယောင်ထင်မှားအဆိုပါရေဘဝဲ၏ဝိသေသလက္ခဏာများမှဖြည့်စွက်အရာဖြစ်တယ်။ ရှေးဟောင်းဒဏ္ဍာရီနံပါတ်အဖြစ် 8 ဘဝများစွာကိုရှုထောင့်များတွင်သိသာထင်ရှားသောကပြောပါတယ်။ ဤသည်ရှစ်ခြေထောက်နှင့်အတူသတ္တဝါများအဖြစ်အစွမ်းထက်စဉ်းစားနေကြသည်အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါရေဘဝဲဘာသာရေးသတ္တဝါဤအမြိုးအစားသို့ကျရောက်ပါတယ်။ အဆိုပါရေဘဝဲတက်တူးထိုးအဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်စိုက်ပျိုးဖို့ခြေလက်အင်္ဂါများ၏စွမ်းရည်ကိုကနေဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါတက်တူးသစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်ပြန်လည်နုပျိုခြင်းဆိုလိုနိုင်ပါ။
လူတွေအများအပြားဟာသူတို့ရဲ့အတိတ်ဖျက်နိုင်ယုံကြည်ဖို့ကအသုံးပြုခြင်းပါစေ။ ရေဘဝဲတက်တူးထိုးလည်းမျှော်လင့်ချက်အနာဂတ်၌ရှိကွောငျးကိုဆိုလိုသည်။ ယင်း၏အများအပြားခြေလက်အင်္ဂါနှင့်အတူအမှုအရာတွေအများကြီးလုပ်ဖို့ရေဘဝဲများ၏စွမ်းရည်ကိုလူသတ္တဝါအပေါင်းတို့ကို multitasking ကြောင်းယုံကြည်စေသည်အရာဖြစ်တယ်။ ဒါဟာတက်တူးထိုးတစ်ဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းလိုအပ်သောသူတို့အဘို့ကြောင်းရေဘဝဲဆိုလိုရှိပါတယ်။ အဆိုပါတက်တူးထိုးမှော်, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နှင့်ရှားပါးဆိုလိုသည်။ အဆိုပါရေဘဝဲ၏ဒီဇိုင်းကြောင့်ထောက်ခံမှုဖန်တီးရန်၎င်း၏စွမ်းရည်၏လူအစုအဝေးထဲကရပ်စေသည်ဘယ်အရာကိုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျားတက်တူးထိုးအထူးသဖြင့်အာရှသားတို့တွင်လူကြိုက်အများဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကထူးချွန်စေသည်အရာဖြစ်တယ်။ တစ်ဦးကျား၏တက်တူးထိုးလူကိုမဆိုကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲအသက်ရှင်နေထိုင်သောလမ်းနေတဲ့အကြောင်းအချက်ပြအရာဖြစ်တယ်။ သူတို့ကအာရုံငါးပါး, ကြမ်းကြုတ်ခွန်အားနှင့်အာဏာကိုကိုယ်စားပြုသည်။ သူတို့ကသူတို့ကောငျးကငျအင်အားကြီးကအုပ်ချုပ်လျက်ရှိသည်ဟုယုံကြည်သောကြောင့်နေရောင်ခြည် Totem ဖြစ်ဟုဆိုသည်နိုင်ပါသည်။
သူတို့ဗီဇအတိုင်းယုံကြည်သောကြောင့်ကျားတက်တူးထိုးဘို့အသွားသူတွေကိုစိတ်အားထက်သန်မှုကအုပ်ချုပ်ကြသည်မဟုတ်။ သူတို့နိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်အစွမ်းထက်ပြသရန်ချစ်သူများမှင်ဒီတက်တူး။ အဆိုပါကျားကွယ်လွန်သွားကြပါပြီသူမြား၏ကာကွယ်ဖြစ်မည်ဟုယုံကြည်နေသည်။ ဒါကသူတို့မကြာခဏသင်္ချိုင်းသို့မဟုတ်ဂူပေါ်တွင်တွေ့မြင်နေကြသည့်အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။
မိုးမခဒီဇိုင်းကွင်းဆွဲတက်တူးထိုးဇာတိအမေရိကတိုက်ကနေသူတို့အဘို့ရေပန်းစားသည်။ အဆိုပါတက်တူးဒီဇိုင်းကိုလူအများ၏ချမ်းသာကြွယ်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်သင်္ကေတ။ အဆိုပါမိုးမခဒီဇိုင်းကွင်းဆွဲတက်တူးထိုးဆိုးနှင့်အနုတ်လက္ခဏာစွမ်းအင်ကွာတာအတွက်ကူညီပေးသည်။ မကောင်းတဲ့အိပ်မက်သို့မဟုတ်အိပ်မက်ဆိုးကွာတွှေချင်သူကိုလူတွေကမိုးမခဒီဇိုင်းကွင်းဆွဲတက်တူးထိုး၏အသုံးပြုမှုကိုလုပ်ရမည်။ သူကိုမှင်သည့်တက်တူးထိုးသူများသည်ငြိမ်းချမ်းစွာနှင့်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အိပ်နိုင်ကြသည်။ သင်မိုးမခဒီဇိုင်းကွင်းဆွဲတက်တူးကိုသုံးနိုင်သည်ဘဝအပေါ်ကိုယ်စားပြုမှုမှတဆင့်ပုံပြင်များအများကြီးပြောပြကြလိမ့်မည်သည့်ခြွင်းချက်တက်တူးဒီဇိုင်းရတဲ့၏စီစဉ်နေတယ်ဆိုရင်။
လင်းယုန် Tattoo ဒီဇိုင်း၏အဓိပ်ပာယျသငျသညျကိုသိရန်ကိုချစ်မယ်လို့တစ်ခုခုပါပဲ။ အဆိုပါတက်တူးအတူပါလာသည်ဟုမြောက်မြားစွာအဓိပ္ပါယ်များရှိပါသည်။ ရွှေလင်းတကမ္ဘာတဝှမ်း gloried ခဲ့ပြီးသီလကပူးတွဲသောငှက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာခွန်အားကိုအခွင့်အလမ်း, ပညာ, လွတ်လပ်မှု, virility နှင့်ပုလ်, ပါဝါ, လွှမ်းမိုး, အခွင့်အလမ်း, ဘုရားတမန်များနှင့်ဝိညာဉ်ရေးဆိုလိုနိုင်ပါ။ ဒါဟာအာဏာကိုအများကြီးမှဤမျှလောက်များစွာသောအမှုအရာကိုဆိုလိုသည်။ အဆိုပါဒီဇိုင်းကထူးခြားတဲ့သူ့ရဲ့ Dominic သြဇာလွှမ်းမိုးမှုန်းကျင်ခံစားခဲ့ရနှင့်အတူစေသည်။ သူတို့ရဲ့အဓိပ္ပါယ်များအတူပါလာသည်ဟုရွှေလင်းတ၏ကွဲပြားခြားနားသောအပွောငျးအလဲရှိပါတယ်။
လွတ်လပ်မှုနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးရွှေလင်းတဆွေးနွေးပွဲများ၏အတောင်ပံ။ သငျသညျလွတ်လပ်မှုကိုရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျအဘို့အသွားနိုင် inking တဦးသည်ရွှေလင်းတတက်တူးဖြစ်ပါတယ်။ ကလူအများကြီးကိုမကောင်းသောအပယ်သွားဂရုမစိုက်ဖို့က၏အသုံးပြုမှုကိုအောင်အဘယ်ကြောင့်ကမ်းလှမ်းအဆိုပါကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေလင်းတတက်တူးထိုးခြင်း၏ပုံဆွဲသူကနှင့်တကွကြွလာအဓိပ္ပါယ်ကိုအပြည့်အဝသိသာကြောင်းထိုကဲ့သို့သောလမ်း၌ပြစ်မှားမိသည်။ ဒါကြောင့်လူကြိုက်များနှင့်လည်းရှားပါးသည်အဘယ်ကြောင့်ဤသည်ဖြစ်ပါတယ်။ ငှက်၏ရှားပါးကမ္ဘာတဝှမ်းတန်ဖိုးထားသောအရာတစ်ခုခုသည်။ သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်မှပူးတွဲတန်ခိုးအာနုဘော်များသိသိသာသာကိုယ်စားပြုမှုရှိချင်လျှင်, လင်းယုန်တက်တူးထိုးကြောင်းကိုယ်စားပြုမှုစေလိမ့်မည်ဟုတစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
မျက်စိသည်တက်တူးထိုးကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှုများအတွင်းပျံ့နှံ့သည်နှင့်လည်းအဲဂုတ္တုလူအစဉ်အလာခရစ်ယာန်များအနေဖြင့်ကွဲပြားနေသည်။ အဆိုပါမျက်စိ omniscience, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးသို့မဟုတ်ရှင်းလင်းပြတ်သားပုံဆောင်တဲ့၌သင်တို့ကိုကူညီပေးပါမည်။ အချို့ကထိုသို့အသုံးပြုခြင်းကိုကာမဂုဏ်ကိုယ်စားပြုစေလိမ့်မည်။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စကိုသင်ရှိသည်သောရည်ရွယ်ချက်အမျိုးအစား, မျက်စိတက်တူးထိုးသင့်ရဲ့ကိုယ်စားပြုမှုအတွက်ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုတစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးသူပုန်များမှာရင်တောင်မျက်စိသငျသညျဖုံးအုပျခဲ့သညျ။ အဘယ်သူမျှမမျက်စိတက်တူးနှင့်ဣတ္လူနေမှုပုံစံစတဲ့သင်လေးမွတျပါလျှင်ကိုယ်စားပြုသည်မဟုတ်, သင်မျက်စိတက်တူးထိုးမပွုနိုငျသညျ။
ကွဲပြားခြားနားသောသတ္တဝါများ၏မျက်စိကွဲပြားခြားနားသောအရာတို့ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ဥပမာ horus နှင့်အခြားသူများ၏မျက်လုံးများယူ wearer မှသိသာကြောင်းတက်တူးထိုးအဓိပ္ပါယ်များရှိသည်။ မျက်စိသည်တက်တူးထိုးစူပါလှပခြင်းနှင့်လည်းတဦးတည်းရဲ့အနာဂတ်၏အာဏာအကြောင်းကိုပြောပြသည်။ အဆိုပါမျက်စိလူတို့သည်မိမိတို့ဘဝပုံစံများတန်ဖိုးထားစေသည်တဲ့တက်တူးဒီဇိုင်းဖြစ်လာသည်။ နတ်ဘုရားများ၏အားလုံးမြင်နေသဘောသဘာဝကိုလည်းမျက်စိဖြင့်ကိုယ်စားပြုနိုင်ပါသည်။
ပန်းပွင့်တက်တူးထိုးဘုံနှင့်ကမ္ဘာ၏အမျိုးမျိုးသောယဉ်ကျေးမှုတွင်လည်းရေပန်းစားသည်။ အစဉ်အလာ, အပွင့်တက်တူးထိုးမိန်းမများအဘို့အအဓိကအားဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းပွင့်၏ဂုဏ်အသရေကိုအသုံးပြုကြောင်းအပွင့်ပေါ် မူတည်. တွေအများကြီးသောအရာတို့ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ အဆိုပါနှင်းဆီပန်းပွင့်အခြားပန်းလွန်းသူတို့ရဲ့အဓိပ္ပါယ်များရှိရုံနဲ့တူ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အဓိပ္ပာယ်ကိုရှိပါတယ်။ အဆိုပါဂျပန်အပွင့်တက်တူးအများဆုံးလူကြိုက်များတို့တွင်နှင့်ကသိသိသာသာအဓိပ္ပာယ်ကိုရှိပါတယ်။ ပန်းပွင့်ကာမဂုဏ်, မျိုးပွား, မွေးဖွား, ထောက်ခံမှု, အိပ်မက်, မှော်, ကြေးဇူးတငျကွောငျး, စောင့်ရှောက်မှုနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုကိုယ်စားပြုနိုင်ပါတယ်။ အပွင့်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုထို wear ကြွင်းသောအရာမှပေါ်သွားချင်သောမက်ဆေ့ခ်ျနှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။
ပန်းပွင့်တက်တူးထိုးအဓိပ္ပာယ်ကိုကြောင့်ထိုသို့ပြုထားပါတယ်သောသင်္ကေတ၏လျစ်လျူရှုမရနိုင်ပါ။ ပြည်သူ့ယခုသူတို့ကိုသာထိုသူတို့အဘို့ကိုဆိုလိုနိုင်သတင်းစကားများ၏အထူး type ကိုပေးစေခြင်းငှါကြောင့်အခြားပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ပစ္စည်းများကိုဆွဲအားဖြင့်ကမှော်သက်ရောက်မှုဖြည့်စွက်ထားပါသည်။ အဆိုပါနှင်းဆီကနေကြာပန်းပွင့်မှတိုင်းပန်းပွင့်ကသူတို့အဓိပ္ပါယ်များရှိပါသည်။ သင်သွားချင်သောမက်ဆေ့ခ်ျကိုအမျိုးအစားအပေါ်ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်သူတဦးတည်းဖြစ်၏။ ပန်းပွင့်တက်တူးထိုးအဓိပ္ပါယ်များဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကကမ္ဘာတဝှမ်းဝေမျှသောကျယ်ပြန့်အဓိပ္ပါယ်များနှင့်သင်္ကေတ၏အကောင်းဆုံးများထဲမှဖြစ်ကြသည်။ ပန်းပွင့်စကား, အရောင်များနှင့်ပစ္စည်းများကိုထည့်သွင်းသောအခါ, သူတို့သည်များစွာသောအဓိပ္ပါယ်များပြ။
တစ်ဦးကဂျီဩမေတြီတက်တူးထိုးသင်တို့တွင်အထင်နိုင်ပါတယ်ထက်ပိုဆိုလိုသည်။ ဒါဟာ motif နဲ့တူကြောင်းအထူးဒီဇိုင်းရှိပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုဒီဒီဇိုင်းဆွေးနွေးပွဲစဉ်ဆက်မပြတ်နှင့်တိကျသောဖြစ်ပါတယ်။ ပုံသဏ္ဍာန်သင်္ချာနှင့်အတူလုပ်ဖို့အများကြီးရှိပြီးအမြဲလူတွေအများကြီးတိကျစွာ, လက်ကျန်ငွေနှင့်ကိုက်ညီမှုကိုယ်စားပြုအသုံးပြုသည့်တက်တူးထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်လမ်းကြိုတင်ခန့်မှန်းအကြောင်းကိုဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
ဂျီဩမေတြီတက်တူးထိုးအဓိပ္ပာယ်ကို comforatbility နှင့်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဆိုလိုနိုင်ပါ။ ထို့အပြင်ရောငျ့ရဲနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုမှဆင်းဂျီဩမေတြီအချက်များနှင့် ပတ်သက်. အရာခပ်သိမ်း, ထိုသို့လက်မှတ်ရေးထိုးသောလမ်းကတက်တူးထိုးတွေထဲကရှားပါး type ကိုမှန်ကန်စေသည်။ လူအများစုရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုမှတံခါးသော့ကိုတစ်ဦးတက်တူးထိုးအပေါ်ရေးဆွဲနိုင်ပါသည်။ ဂျီဩမေတြီတက်တူးထိုးသောသူတို့သည်အသက်တာ၌အောင်မြင်ခဲ့သောအရာကိုတန်ဖိုးထားအတွက်အသုံးပြုမှုတွေအများကြီးကြောင်းတံတားဖြစ်လာသည်။
ဒါဟာအစဖြစ်တယ်တဲ့ wearer ၏နားလည်မှုကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ သင်အသက်တာ၌précisedနှင့်ဟန်ချက်ညီသောလမ်းကိုချွတ်ပြသချင်သည့်အခါ, သင်သင်္ချာတိကျမှုနှင့်ခြွင်းချက်ဖြစ်သက်သေပြသောဂျီဩမေတြီတက်တူးထိုး၏အသုံးပြုမှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါဂျီဩမေတြီတက်တူးထိုးပေါ်တွင်အသုံးပြုခံရဖို့အရောင်ကိုလည်းသင်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောအဓိပ္ပာယ်ကိုပေးနိုင်ပါသည်။ ဂျီဩမေတြီတက်တူးထိုးခြင်း၏စိတ်ကြိုက်ကမင်းသမီးချစ်မြတ်နိုးစေသည်အရာဖြစ်တယ်။
Hamsa Tattoo ဓိပ်ပာယျ
Hamsa တက်တူးထိုးအဓိပ္ပာယ်ကိုအလွန်ကျယ်ပြန်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအမျိုးမျိုးသောအဓိပ္ပါယ်များရှိပါသည်။ အဆိုပါတက်တူးထိုးနည်းပညာပိုင်းဒီဗေဒခံစားမှုပူဇော်ကြောင်းပုံစံများနှင့်သင်္ကေတများပါဝင်သည်။ အဆိုပါတက်တူးအတွက်ငါးလူသားတစ်ဦးရဲ့အာရုံကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ ဒါဟာ hamsa တက်တူးထိုးယုံကြည်မှု, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, တည်ငြိမ်ခြင်းနှင့်သတ္တိသင်္ကေတကြောင်းယုံကြည်ရသည်။ အဆိုပါ hamsa တက်တူးထိုးကိုယ်စားပြုနိုင်နည်းလမ်းနှစ်ခုရှိပါတယ်။ ပထမဦးစွာပြုလုပ်မကောင်းသောအသို့မဟုတ်အနုတ်လက္ခဏာအရာများသည်ကွယ်ပျောက်စောင့်ရှောက်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်နေ့အရာကြောင့်ကောင်းသောကံဆောင်ကြဉ်းရန်အသုံးပြုဖြစ်ပါတယ်။
ကမျက်စိတစ်လျှောက်တွင်အသုံးပြုသည်အခါကကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုကိုယ်စားပြုဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်တူသော Hamsa တက်တူးထိုးနည်းလမ်းများစွာအတွက်စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်; Horus ၏မျက်စိ။ ဒီမျက်စိကလူကိုစောင့်နှင့်ပင်မကောင်းသောအပယ်သွားတွန်းနိုင်မယုံကြည်ရသည်။ အစ္စလာမ်ဘာသာမှာတော့ Hamsa တက်တူးထိုးငါးအစ္စလာမ်မစ်သင်္ကေတအကြောင်းပြောနေတာများတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ က Fatima ၏လက်ကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်ဘာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ Fatima ၏လက် Fatima Zahra ကိုယ်စားပြုတယ်။ Fatima မုဟမ္မဒ်၏သမီး။
ဂျူးဘာသာမှာ, သူတို့ရဲ့ဆုတောင်းပဌနာအတွက်ငါးအာရုံနှင့်လည်း5စာအုပ်များရာကျမ်းကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ Hamsa တက်တူးထိုးအဓိပ္ပာယ်အရှိဆုံးယဉ်ကျေးမှုသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့အယူဝါဒတချို့၏ကြေးဇူးတငျကွောငျးများတွင်အသုံးပြုခဲ့ကြကြောင်းအရာတစ်ခုခုသည်။ ဒါဟာသိပ်ထက်ပိုပြီးဆိုလိုသည်။
မိန်းမတို့အဘို့စစ်ဆေးမှုများနောက်ဆုံးပေါ် hamsa တက်တူးဒီဇိုင်းအယူအဆအတွက်ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ။
အဆိုပါငျးမွီးကောကျတက်တူးထိုးကမ္ဘာ၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများကနေလူတွေကိုအများကြီးကိုဆိုလိုသည်။ အဆိုပါတက်တူးထိုးသင်္ကေတများနှင့်အများအားဖြင့်သတ္တဝါအပေါင်းတို့၏အမူအကျင့်အပေါ်အခြေခံပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကြောင့်ကမိတ်လိုက်နေစဉ်အတွင်းစေသည်ကခုန်အမျိုးအစားကိုမှအထီးအတွက် arousal နှင့်လိင်ကိုယ်စားပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာမာယာတို့ကခွဲစိတ်ကုသမှုကိုကိုယ်စားပြုရန်အသုံးပြုသည်နှင့်ကင်းမြီးကောက်အများအားဖြင့်မကောင်းသောအနဲ့ဆက်စပ်ကွဲပြားခြားနားသောအရာတို့ကိုဆိုလိုမှကွဲပြားခြားနားသောဘာသာတရားများကအသုံးပြုသည်။ ဒါဟာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုဆိုလိုတာလည်းတစ်ဦးတိုက်လေယာဉ်ကိုကိုယ်စားပြုဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ကင်ဆာအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတစ်ဦးတွေအများကြီးသူတို့ရဲ့ကင်ဆာခရီး၏ဇာတ်လမ်းပြောပြရန်တက်တူးထိုး၏အသုံးပြုမှုကိုလုပ်ရမည်။ တိုက်လေယာဉ်များသို့မဟုတ်ပင်လက်ဝှေ့သမားကိုမကြာခဏသူတို့နေသောပြသရန်တက်တူးထိုး၏အသုံးချနေမြင်ကြသည်။ တချို့ကအထိခိုက်မခံကျိန် ဆို. ပူဇော်ဂုဏျသိက်ခာရှိရှိနဲ့သစ္စာစောင့်သိဆိုလိုမှယူနေစဉ်ကငျးမွီးကောတက်တူးထိုးခုခံခြင်းနှင့်ရုန်းကန်ဆိုလိုသည်။ အဆိုပါတက်တူးထိုးလည်းစိတ်အားထက်သန်မှု, ခိုင်မာခြင်း, ရန်ပွဲ, သည်းခံခြင်း, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, ဇွဲ, ကာကွယ်ရေး, သေခြင်း, သစ္စာရှိမှုနှင့်မကောင်းသောအအကြောင်းပြောနေတာများတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
သင်ကငျးမွီးကောတက်တူးထိုးသည်သင်ဆိုလိုချင်သောအရာကိုဆုံးဖြတ်။ သငျသညျမှရွေးချယ်နိုင်ပြီးသူတို့ထဲကတစ်ဦးချင်းစီကသူတို့ရဲ့အဓိပ္ပါယ်များရှိသည်ကိုငျးမွီးကောကျတက်တူးဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ သို့သျောလညျးသငျသညျကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုကိုဆိုလိုတာရန်သင့်တက်တူးထိုးဖို့ထိတွေ့ပေးနိုင်ပါသည်။
ဦးခေါင်းခွံ Tattoos ဆိုလိုတစ်နေရာတည်းကနေအခြားဖို့ခြားနားသည်။ အဲဒီမှာခေါင်းခွံ၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများဖြစ်ကြပြီး၎င်းတို့သည်လည်းမိမိတို့၏အဓိပ္ပါယ်များရှိသည်။ ကြီးမားသောမျက်စိ socket နှင့်အတူရေးဆွဲအထူးသဖြင့်အခါဦးခေါင်းခွံလူများ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်အားဖြင့်အသေသတ်ခြင်းကိုဆိုလိုတယ်သောအယူအဆစစ်မှန်တဲ့မည်မဟုတ်ပါ။ အဆိုပါဦးခေါင်းခွံဤမျှလောက်များစွာသောနည်းလမ်းတွေထဲမှာရေးဆွဲနိုင်ပြီးသူတို့သည်သင့်ခစျြလိမျ့မညျကွီးအဓိပ္ပါယ်များနှင့်အတူတက်အဆုံးသတ်။ အဆိုပါဦးခေါင်းခွံတက်တူးထိုးကွယ်လွန်နှင့်လည်းငါတို့အားလုံး၎င်း၏လေးရယ်မှယခုဘဝအသက်ရှင်နေထိုင်သင့်ကြောင်းသူတစ်ဦး၏သတိပေးချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ခေါင်းခွံ၏ဒီဇိုင်းများကိုလည်းမကြာခဏမက္ကဆီကန်ဦးခေါင်းခွံတက်တူးထိုးခြင်းသို့မဟုတ်သကြားလုံးဦးခေါင်းခွံတက်တူးထိုးဟုခေါ်ဝေါ်သောနာမည်ကျော်သကြားဦးခေါင်းခွံတက်တူးထိုးကဲ့သို့မိမိတို့အဓိပ္ပါယ်များရှိသည်။ အဆိုပါမက္ကဆီကိုကြောင့်ထိုသို့ပြုနေရာသောအခန်းကဏ္ဍများသေတက်တူးထိုးများ၏ Day ကိုကိုချစ်ဥပမာကိုယူပါ။
ထိုအဦးခေါင်းခွံတက်တူး၏အသုံးပြုမှုကိုလုပ်သူကိုအမျိုးသမီးများနေ့ကိုမကြာခဏပိုအဓိပ္ပါယ်များပေးရကြီးမြတ်အရောင်နှင့်အတူကလုပ်ပါ။ အထူးသဖြင့် crossbones ပင်လယ်ဓားပြများနှင့်အတူဦးခေါင်းခွံပေါင်းစပ်သူတွေကိုရှိပါတယ်, ထိုတက်တူးထိုးလူတစ်ဦး၏အဆိုအရအဓိပ္ပါယ်များအများကြီးရှိပါတယ်သည့်ပုံဆွဲရှိပါတယ်။
အဆိုပါအမျိုးသမီးများသည်မကြာခဏလူများတက်တူးထိုးကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အဓိပ္ပါယ်များသည်လည်းအလွန် feep သောလမ်းပြောင်းလဲနေတဲ့အတွက်အရောင်များကိုသုံးပါ။
နေနှင့်လ Tattoos ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုသင် inking အဘို့အသွားသည့်အခါသတိထားဖြစ်သင့်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုသည်။ နေနှင့်လ၏တက်တူးစိတ်ကူးမဆိုဖက်ရှင်အကြောင်းနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏အသုံးပြုမှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်များစွာကိုပုံစံမျိုးစုံနှင့်ဒီဇိုင်းများရှိပါတယ်။ အဆုံးသတ်မသင့်သောအသက်တာ၏စက်ဝိုင်းအကြောင်းကိုလနှင့်နေရောင်ပုံသဏ္ဍာန်ဆွေးနွေးပွဲများ၏အသွင်သဏ္ဌာန်။ တစ်နှစ်ခွဲနေနှင့်လသည်စက်ဝိုင်းအတွင်း၌ထားရှိတဲ့အခါအဓိပ္ပာယ်ကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါသည်။
ဒါဟာနတ်ဘုရားမမှကြွလာသောအခါလတက်တူးထိုးအချို့သောယဉ်ကျေးမှုများတွင်အသက်တာ၏အမျိုးသမီးရှုထောင့်ဆိုလိုနိုင်ပါတယ်နေစဉ်နေရောင်တက်တူးအကြောင်းပြောနေတာပါကခွန်အားကိုအာဏာနှင့်တစ်ဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ နေနှင့်လအရောင်များမှာသောအခါ, အဓိပ္ပါယ်များသည်လည်းသင်တို့ကိုရွေးယူဘူးသောအရောင်များကိုပေါ် မူတည်. ကွာခြား။ မကြာခဏဘဝ၏လူရှုထောင့်နေတဲ့အကြောင်းအချက်ပြသည့်နေရောင်ဟာယဉ်ယန်ချီးမွမ်းပြသနိုင်ဖို့လနဲ့ပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါဣတ္နှင့်ပုလ်ကြားဆက်ဆံရေးနေနှင့်လတက်တူးနှင့်အတူအပြည့်အဝသင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်။
နေနှင့်လတက်တူးထိုးချစ်သူများအကြားပြင်းစွာသောအကြောင်းအလိုဆန္ဒအကြောင်းပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။ နှစ်ခုကောငျးကငျအလောင်းများ၏ပေါင်းစပ်မည်သူမဆိုအသုံးပြုသောနိုင်အံ့သြဖွယ်တက်တူးဒီဇိုင်းဖြစ်လာသည်ဘယ်ကြောင့်ဒီဖြစ်ပါသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုတက်တူးထိုးဒီဇိုင်းကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ပါတယ်။
နေရောင် Tattoos အမြဲပင်ရှေးဟောင်းရက်ပေါင်းကာလအတွင်းရေပန်းစားခဲ့ကြပြီ။ နေရောင်၏အထင်ကရသဘာဝအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံးကဆွဲဆောင်ရာဖြစ်တယ်။ နေရောင်၏အရေးပါမှုကိုဖြစ်စေအနုတ်လက္ခဏာသို့မဟုတ်အပြုသဘောနိုင်ပါတယ်နှင့်ဤပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအနေဖြင့်လာမယ့်ဘယ်မှာမှအယဉ်ကျေးမှုပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဒါဟာဘဝရဲ့နေရောင်မရှိဘဲကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည်မရနိုင်သည်ကိုအဘယ်သူမျှမလျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ နေရောင်ကိုအသက်, ခွန်အားစွမ်းအင်, မေတ္တာနှင့်ဘဝထောက်ခံမှုဆိုလိုနိုင်ပါ။ ဒါဟာအစတစ်ဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းဆိုလိုနိုင်ပါတယ်နှင့်အချို့သောဘာသာတရားကိုလည်းနေရောင်နှင့် ပတ်သက်. အထူးအဓိပ္ပါယ်များရှိသည်။ နေရောင်ကိုတက်တူးထိုးရေးဆွဲနိုင်ပြီးသူတို့အဓိပ္ပါယ်များရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းအမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ အဆိုပါမြင့်တက်နေရောင်ဘုရားသခငျ့အာဏာနှင့်ညားဖြစ်တည်မှုဆိုလိုနိုင်ပါ။ လူတွေအများအပြားအရှိဆုံးအားကစားပရိတ်သတ်၏အသုံးပြုမှုကိုနေရောင်မာရ်နတ်တက်တူးများကဲ့သို့ထွက်ရပ်တည်ရန်နေရောင်၏အသုံးပြုမှုကိုလုပ်ရမည်။
သူတို့ရဲ့အတွင်းစိတ်အစွမ်းသတ္တိ, စိတ်ကိုပြသချင်သူတွေကိုမကြာခဏပြုလုပ်ဘို့အသွားအဘယ်ကြောင့် Sun ကတက်တူးထိုးအဓိပ္ပါယ်များရှိပါသည်။ နေရောင်ကိုအထူးအဓိပ္ပါယ်များရှိကြောင်းအဆိုပါလိမ္မော်အရောင်နဲ့တူကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များကိုကြွလာ။ နေရောင်၏ပုံသဏ္ဍာန်လည်းတက်တူးထိုးရာမှလာမယ့်ကြောင်းယဉ်ကျေးမှုအရသိရသည်မြောက်မြားစွာအဓိပ္ပါယ်များရှိပါသည်။ Sun ကတက်တူးကိုတွေ့မြင်ရန်အလွန်ခြွင်းချက်တို့နှင့်ကြီးသောဖြစ်ကြသည်။
သစ်ပင်တက်တူးထိုးဒဏ်ခံနှင့်ရှည်လျားသောတည်မြဲအတွေ့အကြုံ၏သင်္ကေတဖြစ်လာပါတယ်။ သစ်ပင်များကိုအစဉ်အမြဲအချိန်ကြာမြင့်စွာနေထိုင်ရန်နှင့်မြေကြီးပေါ် 500 နှစ်တက်ဖြုန်း, လူသား၏မျိုးဆက် outliving ။ သစ်ပင်များရှည်သောအသက်နှင့်ဒဏ်ခံပြသရန်လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်အဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါသစ်ပင်၏အစှမျးသတ်တိနှငျ့မဆိုအခြေအနေမှာသူ့ရဲ့အလိုက်အထိုက်နေတတ်များစွာသောလူက endears အရာဖြစ်တယ်။ မည်သူမဆိုမှင်သူတို့၏အလောင်းများကိုပေါ်တက်တူးထိုးလို့ရတယ်။ အဆိုပါသစ်ပင်သတ္တဝါတွေအများကြီးမှနေအိမ်များနှင့်လုံခြုံမှုပူဇော်နိုင်ပါတယ်။ ကအခြားသူများဖြစ်စေသောလုံခြုံမှုထူးခြားတဲ့ကြောင်းအရာတစ်ခုခုသည်။ သူတို့ဘဝအတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုရှာဖွေနေပါသည်သူများသည်မိမိတို့၏ inkings များအတွက်အသုံးပြုရန်နိုင်ကြသည်။ သူတို့ကကွဲပြားခြားနားသောအဓိပ္ပါယ်များနှင့်အရေးပါမှုနှင့်အတူသစ်ပင်များများစွာသောအမျိုးအစားများဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါသစ်ပင်ကိုလည်းကြောင့်ထိုသို့ပြုကစားသောအရေးပါမှုအချို့ကိုဘာသာရေးအလေ့အကျင့်အားဖြင့်အသုံးပြုသည်။ ရရှိနိုင်ဖြစ်ကြောင်းသစ်ပင်များ၏နံပါတ်ကကိုယ်စားပြုသောသင်္ကေတလုပ်ရပ်နှင့်အတူအဘယ်သူကိုမျှကကိုသုံးနိုင်သည်။ သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်အချို့သောရဲရင့်ထုတ်ပြန်ချက်များအောင်၌သင်တို့၏ယဉ်ကျေးမှုကိုပိုမိုနီးကပ်စွာသောအပင်၏အသီးကိုအသုံးပြုခြင်းစေနိုင်သည်။ အပင်၏အသင်္ကေတ status ကိုသင်သွားချင်သောအရာကိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုပေါ် မူတည်. သင့်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင်သင်၏တက်တူးထိုးသစ်ပင်၏စိတ်ကြိုက်ပိုမိုအဓိပ္ပာယ်ကိုစေနိုင်သည်။
အဲဒါကိုအခွင့်အာဏာများနှင့်တော်ဝင်အာဏာကိုဆိုလိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဦးရစ်သရဖူတက်တူးထိုးတဲ့အထူးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပန်းဦးရစ်သရဖူကိုအမှုအရာတွေအများကြီးတစ်မွေခံရသောသူအဖြစ်အသုံးပြုပါသည်။ ဒါကြောင့်လည်းသူတို့၏စိတ်နှလုံးကိုပိုမိုနီးကပ်စွာဖြစ်ပါသည်ကြောင့်တော်ဝင်နေအိမ်များမှဖြစ်ကြသည်သူများသည်လွယ်လွယ်ကူကူပန်းဦးရစ်သရဖူကိုတက်တူးနှင့်အတူဖော်ထုတ်ရန်။ ပန်းဦးရစ်သရဖူကိုက၎င်း၏အရေးပါမှုမရှိပါဘူးသောကမ်ဘာပျေါတှငျအဘယ်သူမျှမသောနေရာများရှိပါသည်။ ပန်းဦးရစ်သရဖူကိုတက်တူးထိုးခြင်း၏ကိုယ်စားပြုမှုပင်မိန်းမများနှင့်အတူကျော်မရနိုငျသောအရာတစ်ခုခုသည်။
ပန်းဦးရစ်သရဖူကိုတက်တူးထိုးခေါင်းဆောင်မှုကိုကိုယ်စားပြုဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သူတို့မှတက်တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာသူတို့ကိုပြောပြရန်လုပ်နိုင်တဲ့မှင်ဒီတက်တူးထိုးရွေးချယ်တင်မြှောက်သူများ။ အဆိုပါတက်တူးထိုးဂန္သည်နှင့်သာသင့်ရဲ့အိပ်မက်တွေကိုလိုက်နာဖို့လူလာအောင်နှိုးဆွနိုင်ပါတယ်။ သင်အမှန်တကယ်အခါသင်မှင်သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ဤအကြောင်းတက်တူးလိုအပ်သောလှုံ့ဆော်မှုရရှိနိုင်သည်။ ဒါဟာ inking သူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏အချုပ်အခြာအာဏာနှင့် ပတ်သက်. ကြာပါသည်။ ဒါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်နှင့်လည်းတက်တူးထိုးရှိခြင်းသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏အပွင့်လင်းအကြောင်းကိုဆွေးနွေးပွဲနှင့် ပတ်သက်. ကြာပါသည်။
စိန်တက်တူးကောင်းစွာအလှအပနှင့်စည်းစိမ်နှင့်ဆက်နွယ်ခဲ့ကြကြောင်းတက်တူးအသိအမှတ်ပြုကြသည်။ ဤရွေ့ကားတက်တူးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နေရာအများအပြားမှာမြင်လည်းဆင်ယင်ခြယ်အဖြစ်အသုံးပြုကြသည်။ စိန်၏တက်တူးထိုးဘယျသူမှမအောငျအကြောင်းပြောဆိုရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဤသည်ကဖကျြဆီးခံရမနိုင်သောကြောင့်တက်တူးထိုးပေးပိုင်ခွင့်ပုံဖော်တင်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါတက်တူးအများဆုံးဆည်းကပ်သောအဖိုးတန်ကျောက်များထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဤလူမျိုးကိုရဲစွမ်းသတ္တိနှင့်အလှအပ၏နိမိတ်လက္ခဏာကိုအဖြစ်မြင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးတက်တူးထိုးမှတဆင့်ကမ္ဘာသို့ပြသချင်သောအဖိုးမဖြတ်နိုင်ကြောင်းအယူအဆတခုရှိသည်ဆိုလျှင်, သင်စိန်တက်တူးထိုး၏အသုံးပြုမှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါတက်တူးထိုးမကောင်းသောအတပ်ဖွဲ့များထံမှကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုကိုယ်စားပြုဖို့အသုံးပြုများနှင့်လည်းသူတို့ကြောက်ကျော်လွှားဖို့လူတွေကိုကူညီပေးသည်နိုင်ပါသည်။ အဓိပ္ပာယ်အသင်္ချေနှင့်ဝဠာရဲ့သင်္ကေတဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါစိန်တက်တူးထိုးမှော် Stuff သို့မဟုတ်မှော်စွမ်းအင်ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။ ဘာသာရေးယဇ်ပုရောဟိတ်တစ်ဦးကအများကြီးထိုသို့အသုံးပြုခြင်းကိုလုပ်ရမည်။ အဆိုပါစိန်တက်တူးထိုးသစ္စာရှိမှု, ချစ်ခြင်း, ရိုးသားအလင်း, ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် invisible ဆိုလိုနိုင်ပါတယ်
Infinity Tattoo အဓိပ္ပာယ်ကို
Infinity တက်တူးလို့စားပွဲပေါ်တတ်၏သောအဓိပ္ပါယ်များ၏လူကြိုက်များဘက်မှာတကယ်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါတက်တူးထိုးသူအရေအတွက် 8 ကိုယ်စားပြုပြီးကလူတိုင်းကိုတန်ဖိုးထားခြင်းနှင့်အတူပေါင်းသင်းလိုလားတစ်ခုခုလုပ်ထားပြီးကွင်းဆက်အဆုံးသတ်ဘယ်တော့မှက၎င်း၏အထူးရှိပါတယ်။ အဆိုပါတက်တူးကိုကိုယ်စားပြုသောအဆမဲ့ဖြစ်နိုင်ချေသငျသညျအကွောငျးကိုချစ်ကြလိမ့်မည်အရာဖြစ်တယ်။ ဒါဟာတချို့ယဉ်ကျေးမှုအတွက်ဝင်စားသို့မဟုတ်တစ်ဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းသင်္ကေတ။
အဆိုပါတက်တူးထိုးအသက်, ချစ်ကြည်ရေးသို့မဟုတ်ပင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့တူအသက်တာ၌အမှုအရာတွေအများကြီးဖြစ်စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါတက်တူးထိုးစိတ်နှလုံးကိုသို့မဟုတ်ပင်ကြယ်သင်္ကေတ။ အဆိုပါသင်္ချေတက်တူးထိုးသင်တို့ကိုလည်းအများပြည်သူစိတျဝငျစားကြောင်းကိုအစွမ်းထက်မက်ဆေ့ခ်ျကိုကားမောင်းအတွက်အသုံးပြုချင်စေခြင်းငှါအရာဖွစျသညျ။
ဒါကြောင့်အသင်္ချေတက်တူးထိုးမှကြွလာသောအခါအဘယ်သူမျှမပိုကောင်းကြောင့်ပါဘူး။ ကဒီဇိုင်းရေးဆွဲသောလမ်းနှင့်ကအကြောင်းပြောသွားကြောင်းသင်္ချာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏ကိုယ်စားပြုမှု။ အဆိုပါသင်္ချေတက်တူးပင်လူတို့သညျကိုသူတို့ရှေ့မှာဖြစ်ဘူးထက်ပိုကောင်းတဲ့ဖြစ်ခြင်း၎င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကသူတို့သန်နိဋ်ဌာနျပြောပြရန်ကို အသုံးပြု. ကိုချစ်ကြောင်းမက်ဆေ့ခ်ျကိုတစ်ဦးအထူးအမျိုးအစားဖြစ်လာသည်။ အဆိုပါသင်္ချေတက်တူးထိုးကွဲပြားခြားနားသောပုံစံမျိုးစုံနှင့်အရွယ်အစားအတွက်လာပါတယ်။ အဲဒါကိုထူးခြားတဲ့နှင့်ပိုပြီးအံ့သြဖွယ်စေရန်အခြားပစ္စည်းများထည့်သွင်းသောအခါအဓိပ်ပာယျပိုကျယ်ပြန့်နိုင်ပါတယ်။
ဆာမူရိုင်း Tattoo ဓိပ်ပာယျ
ဆာမူရိုင်းတက်တူးထိုးအသက်တာ၏စစ်သူရဲနည်းလမ်းများအနက်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ bushido- ဟုခေါ်တွင်သောရှားပါးကုဒ်တယ့်တက်တူးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ bushido တစ်ဆာမူရိုင်းအကြောင်းပြောဆိုခုနစ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းရှိတယ်။ အဆိုပါတက်တူးနိုင်ငံရေး, ဂုဏ်အသရေ, ကြင်နာမှု, သစ္စာရှိမှု, ရိုးသားမှုနှင့်ချစ်ဘွယ်သောလက္ခဏာကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ အဆိုပါတက်တူးထိုးလည်း Brave, ပါဝါနှင့်အရင်းအမြစ်များအကြောင်းပြောဆိုရန်အသုံးပြုသည်။ ဒါဟာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, အကူအညီနှငျ့ရဲစွမ်းသတ္တိရပ်တည်ရန်ရေဘဝဲများကဲ့သို့ရှားပါးခြင်းနှင့်ထူးခြားသောဖြစ်ကြောင်းအမှုအရာ, Koi ငါးနှင့်ရေဘဝဲတွင်ဖော်ပြပါရှိသည်နိုင်ပါသည်။
အဆိုပါဆာမူရိုင်းတက်တူးထိုးသူကပိုကောင်းတဲ့လူတွေကသူတို့ရဲ့အကြောက်ကင်းနှင့်ရဲရင့်သောအက္ခရာများကိုကိုယ်စားပြုရန်အဘို့အစေတော်မူပြီ။ သူတို့သည်ခွန်အားနှင့်အာဏာပုံဆောင်သည်။ အဆိုပါတက်တူးထိုးပုလ်ဖြစ်နိုင်ပြီးလူတို့သညျတိုကျပှဲနှင့်လည်းသေခြင်းတရားအနိုင်ရတဲ့အတွက်သုံးစွဲဖို့ချစ်ကြတယ်။ အဆိုပါဆာမူရိုင်းတက်တူးကြောင့်ဝတ်ထားသူလူတစ်ဦး၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။ အဆိုပါတက်တူးထိုးလည်းဣတ္နှင့်အထူးမင်းသမီးအားဖြင့်နှလုံးခေါ်ဆောင်သွားနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါဆာမူရိုင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအခြားသောသူတို့သည်သင်တို့အထဲကပြောနိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဇာတ်လမ်းပြောပြ၌ရှည်လျားသောလမ်းကိုသွားနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါဆာမူရိုင်းတက်တူးထိုးခြင်း၏နေရာချထားလည်းထွက်အချို့ရှိသည်အခြားတက်တူးထိုးအဓိပ္ပါယ်များနှင့်မတူဘဲ သာ. ကွီးမွတျအမြင့်မှရွေ့လျား၌သငျထောကျပံ့ပေးနိုငျသောကွဲပြားခြားနားသောပုံပြင်သို့မဟုတ်အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောပြနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါနေကြာတက်တူးအမှုအရာတွေအများကြီးကိုဆိုလိုသည်။ အပွင့်သည်၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံမှာများအတွက်လူသိများသည်နှင့်တစ်ဦးနေရောင်ကိုချစ်သောသူတို့အားသာ၏နွေရာသီ, နွေရာသီ၏သင်္ကေတသို့မဟုတ်ပင်ချယ်ရီသဘောထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာနေရောင်ထံအပ်နှံသည်အသက်တာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုသင်္ကေတတစ်ခုဒြပ်စင်ဖြစ်လာသည်တဲ့ပန်းပွင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသရဖူကဲ့သို့ဝတ်ဆင်နိုင်ပြီးအမြဲတမ်းနေရောင်အရိပ်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူ့သစ္စာရှိမှု, ပျော်ရွှင်မှုကို, ဖန်ဆင်းခြင်း, နွေးထွေးမှုနဲ့အရောင်အဝါ၏သင်္ကေတအဖြစ်ကယူပါ။
အဆိုပါနေကြာတက်တူးထိုးအများအပြားပုံစံမျိုးစုံနှင့်အရွယ်အစားအတွက်ရေးဆွဲနိုင်ပါသည်, ဤသည်လည်း၎င်းတို့၏အဓိပ္ပါယ်များရှိသည်။ သငျသညျအခွားသူမြား၏စဉ်းစားနိုင်ထက်ပိုမိုနက်ရှိုင်းတစ်ခုခုမှနေရောင်အရေးပါမှုအတိတ်သင့်ရဲ့နေကြာအပြောင်းအရွေ့ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်သောသူဖြစ်ကြ၏။ တချို့လူတွေကတက်တူးကိုလည်းဆိုလိုနိုငျရာဖြစ်သောကြောင့်ရန်ပစ္စည်းများနှင့်ပင်မက်ဆေ့ခ်ျများထည့်ပါ။ ယဉ်ကျေးမှုအဖြေတွေအများကြီးလည်းနေကြာနှင့် ပတ်သက်. ၎င်းတို့၏အထူးအဓိပ္ပါယ်များရှိသည်။ အဆိုပါတက်တူးအမှုအနှေးဆုံးသောထုံးစံ၌မိမိတို့၏အသက်တာကိုပြသချင်သူမြား၏အကြိုက်ဆုံးတွေထဲကဖြစ်လာသည်။ အသက်တာ၏ Brightness ကိုဂုဏ်ယူစွာမတူညီသောနေရာချထားမှုကိုမှတဆင့်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်မိတ်ဆက်ပြသနိုင်ပါသည်။ ကိုယ်ခန္ဓာ၏အသီးအသီးစိတျအပိုငျးတစ်နေကြာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောပြရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဟင်္နာတောတက်တူးထိုးသည့် wearers မှသိသိသာသာတစ်ခုခုကိုဆိုလိုသည်။ ဒါဟာအဓိပ္ပါယ်များအများကြီးရှိကြောင်းကိုခန္ဓာကိုယ်တခုတခုအပေါ်မှာရှေးခေတ်ဂုဏ်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာပျော်ရွှင်မှုကိုကိုယ်စားပြုဖို့အသုံးပြုကံကောင်းခြင်းများနှင့်လည်းစစ်တိုက်, ကလေးမွေးဖွား, ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများနှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားကိုပုံဆောငျပေးနိုငျဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဟင်္တက်တူးထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းနှင့် freehand အကြောင်းပြောဆိုရန်အသုံးပြုသည်။ အဆိုပါဟင်္၏အသုံးချနေသငျသညျဝိညာဏ connection ကိုပေးနှင့်ကအသုံးချနေကြသည်ဤအံ့သြကြည်ညိုစိတ်နဲ့ခံစားချက်တွေကိုရှိပါတယ်လိမ့်မည်ဟုတစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါဟင်္ထားရှိသောကိုယ်ခန္ဓာ၏အသီးအသီးစိတျအပိုငျးက၎င်း၏အရေးပါမှုနှင့်အထူးအဓိပ္ပါယ်များရှိပါသည်။ ဒါဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာအကြောင်းပြောဆိုရန်အ wear ရဲ့လက်ဝါးပေါ်တင်လိုက်တယ်နိုင်ပြီး၎င်းသည်လက်အပေါ်ထားရှိသည့်အခါ, ကကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးပြောသွားလည်းလွှားကိုလည်းထည့်သွင်းထားသည်။
ဟင်္နာတောတက်တူးကိုလူ wearer ဖို့ကြောင့်အရေးပါမှု၏ခြွင်းချက်ကြည့်ဖို့အသုံးပြုတဦးတည်းတက်တူးဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကိုအထူးအဓိပ္ပာယ်ကိုသို့မဟုတ်ပုံပြင်ကိုပြောပြစေခြင်းငှါသူတို့ထည့်သွင်းနိုင်ပစ္စည်းများရှိပါတယ်။ အဆိုပါဟင်္က၎င်း၏ဒီဇိုင်းနှင့်အဓိပ်ပာယျတန်ခိုးတော်ဖြစ်၏။ သင်ကမ္ဘာကြီးကိုပြောပြဖို့အမြဲလိုချင်ခဲ့ကြပြီးသင်လုပ်ဖို့နိုငျကွကွောငျးရဲရင့်ထုတ်ပြန်ချက်ဖြစ်စေခြင်းငှါဟင်္တက်တူးထိုးအသုံးပြုတဲ့အခါသင်ဟာလူအစုအဝေးထဲက step နိုင်ပါတယ်။
ကြောင် Tattoos ၏အဓိပ်ပာယျအရာတွေအများကြီးဆိုလိုနိုင်ပါ။ အဆိုပါ wearer အဆိုပါ feline တက်တူးနှင့်အတူဘာလုပ်ရမှန်းဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်သူဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကြောင်ကံကောင်းပါစေ, ကြွယ်ဣတ္ပါဝါ, လျှို့ဝှက်ချက်များ, နက်နဲသောအရာနှင့်ဘုရား, ဝိညာဉ်ရေး, တစ်ဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်း, နောင်တမလွန် link ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, ပင်ကိုယ်, ထောက်လှမ်းရေး, သနျ့, ကြော့ရှင်းများနှင့်သတိနှင့်ဆက်သွယ်မှုများပါဝင်သည်အရာစရိုက်များ, အများကြီးသင်္ကေတ။
ကြောင်၏ inking မိခင်, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, အမဲလိုက်နှင့်ပင်ဂရုမစိုက်ခြင်းနှင့်ကံဇာတာယူလာ၏စိတ်ကူးရှိပါတယ်။ သူတို့ဉာဏ်, တော်ကကျေးဇူး, အလှအပနှင့်ကြော့ရှင်းဆိုလိုသောကွောငျ့သငျသညျကြောင်တက်တူးအဘို့အသွားနိုင်ပါတယ်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ဥရောပ၌အယူမှားဝါဒနှင့်စုန်းအတတ်နဲ့ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။
ကြောင်အသက်တာ၌လွတ်လပ်ရေးအကြောင်းကိုပြောပြရန်အသုံးပြုကြသည်။ ထူးခြားဆန်းပြားနှင့်အထူးတစ်ခုခုသွားစဉ်းစားကြသူလူများတစ်ဦးကစာရေးကြောင်တက်တူးထိုးဘို့အသွားနိုင်ပါတယ်။ အဓိပ္ပာယ်ကိုသိသာနှင့်နားလည်ရန်အံ့သြလောက်အောင်ကြီးလှ၏။ ကြောင်တက်တူးသူတို့သည်သင့်ရှေ့မှာစဉ်းစားခဲ့ကြပေမည်ဘယ်အရာကိုထံမှကွဲပြားခြားနားသောအဓိပ္ပါယ်များရှိသည်ကိုသေချာစေရန်နဲ့အခြားပစ္စည်းများကိုထည့်သွင်းထားပါသည်။ ကြောင်တက်တူးထိုးခြင်း၏အဓိပ္ပာယ်ကိုမင်းသမီးတွေအများကြီးကြောင့်အဘို့အသွားအကြောင်းရင်းဖြစ်သောလည်း endearing နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာနှင့်တကွကြွလာသောသတိ ပြော. ဖြစ်ပြီးလူအများစုထိုနေ့၏အဆုံးမှာနီးစပ်လာရန်လိုပေမည်သောတစ်ဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းအရေးပါမှုရှိပါတယ်။
လက်ဝါးကပ်တိုင် Tattoo အဓိပ္ပာယ်ကို
လက်ဝါးကပ်တိုင်တက်တူးထိုးများစွာသောလူအရာတွေအများကြီး meanings ။ ဤသည်ကိုအောက်ပါအမှုအရာကိုကိုယ်စားပြု, ပြည်ထောင်စုယောက်ျားနဲ့မိန်းမကို၏, ဘုရားမဲ့ဝါဒ, အဆိုပါမှော်အတတ်, နာကျင်မှုချစ်ခြင်းမေတ္တာသို့မဟုတ်အရှုံးမှတဆင့်ငြိမ်းချမ်းရေး, Regality, ခွန်အား, သတ္တိ, ခရစ်ယာန်ဘာသာ / ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်း, ဘဝ, Sun က / Sun ကကိုးကွယ်ခြင်း, တန်းတူရေး, ဆငျးရဲဒုက်ခ, မရဏနိုင်ပါတယ် တစ်ဦးကိုခစျြတဦးတည်း၏, Gothic အဘိဓါန် / Goth ယဉ်ကျေးမှု, ဝိညာဉ်ရေး, အဆိုပါဣတ္, အပျနှံ, နက္ခတ်, ဂုဏ်, တက်မြန်းသည့်နေ့များ, ယဉ်ကျေးမှု / မိသားစုအမွေအနှစ်နှင့် Memory ။ လက်ဝါးကပ်တိုင်တက်တူးထိုးသည်အလွန်ရေပန်းစားသည်နှင့်စိတ်ကြိုက်နိုင်, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနက်ရှိုင်းသော, ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သမိုင်းဝင်အရေးပါမှုရှိပါတယ်။
အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအများအပြားအကြောင်းရင်းများနှင့်တက်တူးထိုးနှင့်တကွကြွလာသည်ဟုအဓိပ္ပါယ်များ၏ကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်အတူတက်တူးထိုး၏အသုံးပြုမှုကိုလုပ်ရမည်။ လူအများစုဟာအံ့သြလောက်အောင်အကြီးကြည့်ဖို့က customize နှင့်သင်လက်ဝါးကပ်တိုင်ဆိုလိုချင်သောအရာကိုဆုံးဖြတ်ဖို့တဝတည်းဖြစ်ကြ၏။ အဆုံးမှာကြောင့်သင်ကသင်တို့အဘို့ဖြစ်လိမ့်မည်ကြောင်းကိုသင်၏လက်ဝါးကပ်တိုင်စေတယျ။ လက်ဝါးကပ်တိုင်တက်တူးကတူကြောင်းလမ်းပြောင်းပေးဖို့မြောက်မြားစွာပစ္စည်းများနှင့်ပင်မက်ဆေ့ခ်ျမှဆက်ပြောသည်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာအမျိုးမျိုးသောပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အရွယ်အစားလာသောလက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုယူပါ။ ကိုယ်ခန္ဓာ၏မဆက်ဆံလက်ဝါးကပ်တိုင်တက်တူးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကဘာလဲဆိုတာ။ အထဲတွင် fit ပါဘူးကြောင်းရှိသနည်း လူတွေအများအပြားသည်ကွဲပြားခြားနားသောအဓိပ္ပါယ်များရှိသည်။ သင်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ် inking နေကြတယ်ဆိုတာကိုသိရန်အဘို့အဒါဟာအလွန်အရေးကြီးပါသည်။
နှလုံး Tattoo အဓိပ္ပာယ်ကို
နှလုံးတက်တူးထိုးနှစ်ခြိုက်, စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်ချစ်ခြင်းဆိုလိုသည်။ အဲဒီမှာနှလုံး၏အခြားအဓိပ္ပါယ်များဖြစ်ကြပြီးထိုအအဓိပ္ပါယ်များသူတို့ကိုယ်စားပြုသောလမ်းမှလာကြ၏။ စိတျနှလုံးရေးဆွဲကြောင်းလမ်း wearer အရာတွေအများကြီးကိုဆိုလိုသည်။ အဆိုပါအရောင်များ, ပုံစံမျိုးစုံနှင့်တက်တူးထိုး၏အရွယ်အစားကအံ့သြလောက်အောင်ကြောက်မက်ဘွယ်သောအရာတစ်ခုခုသည်။ သင်သည်မေတ္တာတရားကို၏ဇာတ်လမ်းပြောပြရန်ကသုံးနိုင်သည်။ အဆိုပါနှလုံးကိုလည်းကြောင့်ထိုသို့ပြုကစားသောအရေးပါမှုအချို့ကိုဘာသာရေးအလေ့အကျင့်အားဖြင့်အသုံးပြုသည်။ ရရှိနိုင်ဖြစ်ကြောင်းနှလုံးသားများ၏နံပါတ်ကကိုယ်စားပြုသောသင်္ကေတလုပ်ရပ်နှင့်အတူအဘယ်သူကိုမျှကကိုသုံးနိုင်သည်။ သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်အချို့သောရဲရင့်ထုတ်ပြန်ချက်များအောင်၌သင်တို့၏ယဉ်ကျေးမှုကိုပိုမိုနီးကပ်စွာသောနှလုံး၏အသုံးပြုမှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
နှလုံးတက်တူးသင်တို့ပတ်လည်ကြည့်ရှုနိုင်သောအကောင်းဆုံးသောတက်တူးတချို့ရှိနေပါတယ်။ ဒါဟာရှားပါးနှင့်အထူးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်ဒီတက်တူးမြင်သောလူတိုင်းအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ သင်နှင့်အတူသင့်ရဲ့လွတ်မြောက်မှုကိုရှာတဲ့တက်တူးဒီဇိုင်းကိုရှာဖွေနေကြသောအခါ, ဒီတက်တူးထိုးရိုးရိုးကြောင့်အလှအပနှင့်အရေးပါမှု၏အဘို့သွားကြဖို့တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ နှလုံးတက်တူးထိုးလူကြိုက်များဒါပေမယ့်လည်းမက်ဆေ့ခ်ျကဆက်ပြောသည်ကြသောအခါကိုကြည့်ရှုရန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့မသာဖြစ်ပါသည်။ မြှားကိုလည်းပုံပြင်ပြောပြရန်ကဆက်ပြောသည်နေကြသည်။
အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတက်တူးဟင်္တက်တူးလက်ဝါးကပ်တိုင်တက်တူးမျက်စိတက်တူးစုံတွဲတက်တူးခြင်္သေ့သည်တက်တူးFeather Tattooနောက်ကျောတက်တူးချစ်ခြင်းမေတ္တာတက်တူးမြှားတက်တူးတက်တူးထိုးစိတ်ကူးများပန်းပွင့်တက်တူးရေဘဝဲတက်တူးမိန်းကလေးများအဘို့အတက်တူးခြေကျင်း Tattoosပန်းချီတက်တူးကောင်းကင်တမန်ကတက်တူးလူမျိုးစုတက်တူးလူတို့သညျအဘို့အတက်တူးဂျီဩမေတြီ Tattoosသံလိုက်အိမ်မြှောင်တက်တူးရင်ဘတ်တက်တူးrip တက်တူးငှက်တက်တူးကငျးမွီးကောတက်တူးကြောင်တက်တူးပန်းဦးရစ်သရဖူကိုတက်တူးကြာပွင့်ကိုတက်တူးထိုးmehndi ဒီဇိုင်းခြေလျင်တက်တူးလက်မောင်းတက်တူးချယ်ရီပွင့်တက်တူးအသင်္ချေတက်တူးနေရောင်တက်တူးနှလုံး Tattoosကျောက်ဆူးတက်တူးစိန်တက်တူးလက်တက်တူးလက်တက်တူးဂီတတက်တူးလိပ်ပြာတက်တူးချစ်စရာတက်တူးရာသီခွင်အရိပ်လက္ခဏာတက်တူးရွှေလင်းတတက်တူးအစ်မတက်တူးဆင်တက်တူးတက်တူးထလတက်တူးKoi ငါးတက်တူးလည်ပင်းတက်တူး